Amaphepha omtshato-Yonke into okufuneka uyazi | Bezzia
Amaphepha omtshato: Yonke into ekufuneka uyazi!
USusana godoy | 05/05/2022 16:00 | Umtshato
Siyazi ukuba emtshatweni kufuneka ubophe izinto ezininzi ukuze ekugqibeleni, sibe nosuku lwamaphupha. Ngenxa yesi sizathu, enye yeengongoma ezibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo amaphepha omtshato. Liyinyaniso elokuba ayibonwa yonke imitshato. Nangona xa besenza, bafika ngobumnandi kunye nemvelaphi ngosuku olukhethekileyo.
Ke, ukuba ucinga ngokuthatha iminyhadala yomtshato, kungafuneka uqale ekuqaleni kwaye ucinge yintoni imisebenzi yabo (ekubeni benokuba nangaphezulu kwesinye), baya kuthwala ntoni ezandleni zabo, bangene nini nokunye okuninzi. Ke, musa ukuphulukana neenkcukacha kwaye ngokuqinisekileyo, emva kokwazi yonke into oyifunayo, uya kuzikhethela.
1 athini amaphepha
2 Iphepha linxiba njani?
3 Yeyiphi imisebenzi yamaphepha
4 Ubudala bamaphepha omtshato
Amaphepha omtshato ngabo bantwana bangabalinganiswa bomngcelele womtshato. Ngoko omnye wemisebenzi yawo, njengoko siza kubona kamva, uya kuba kukukhapha umtshakazi nomyeni. Kodwa kuyinyani ukuba nabo banentsingiselo kwaye oko kukuba iindima zabo aziyonto intsha kodwa kufuneka sibuyele kwiRoma yamandulo. Kuye, kwavela amantombazana amancinci anika umtshakazi nomyeni zombini iintyatyambo kunye nengqolowa. Zombini ezi khetho zaqwalaselwa ngomfuziselo wempumelelo kunye nokuchuma. Kancinci kancinci, amakhwenkwe kunye namantombazana anika ubomi kulo mngcelele ukuze ithamsanqa libe kwicala lesibini esitshatayo.
Iphepha linxiba njani?
Inyaniso kukuba zininzi iindlela zokunxiba. Ngonaphakade ungakhetha kancinane ngokuxhomekeke kumxholo womtshato. Kodwa inyaniso kukuba, njengomgaqo jikelele, amantombazana anxiba iingubo ezinemibala ekhanyayo efana nemhlophe okanye i-ecru. Ihamba kunye nezicathulo ze-ballerina kunye neentyatyambo okanye izaphetha kwiindlela zabo zeenwele. Ngelixa abafana banokunxiba ihempe kunye nevest, kunye neesuti kunye neqhina, ukuba ufuna umtshato wakho ube nesitayile esiphucukileyo. Kodwa njengoko sisitsho, unokutsalwa sisitayile esiqhelekileyo esiya kuthi sikhululeke ngakumbi kubo.
Yeyiphi imisebenzi yamaphepha
Banokuba nemisebenzi emininzi, njengoko siqhubele phambili ngaphambili. Bambi baphethe imbopheleleko yokufika xa umyeni sele elindile yaye beza nomqondiso ochaza ngokufika komtshakazi. Isenokuba libinzana elikrelekrele okanye hayi, kodwa liya kubunjwa ukuba libe sisilumkiso esilula. Ngaphambi nje kokufika komtshakazi, amantombazana aya kubonakala ngeebhasikidi kunye neentyatyambo zeentyatyambo, eziya kuzishiya ngasemva.. Kwakhona, amanye amaphepha omtshato anokugqoka imifelandawonye kwaye eme macala omabini, ecaleni komtshakazi nomyeni. Ekugqibeleni, emva komtshakazi, kusenokuvela amanye amaphepha anomsebenzi wokumfaka ilokhwe, logama nje eyifuna.
Ubudala bamaphepha omtshato
Kule meko, iminyaka nayo ibalulekile. Ngokuba kucetyiswa ukuba bangaphezulu kweminyaka emi-3 kwaye bangaphantsi kwesi-8. Ngaphezu kwayo nantoni na kuba abancinci kakhulu baya kudinwa ngokukhawuleza kwaye abayi kuwenza umsebenzi ohambelana nawo. Ngokufanayo, xa sele bekhulile basenokungafuni ukuba yinxalenye yetheko lomtshato. Ke, phakathi kweminyaka emi-3 kunye ne-8 ubudala ithathwa njengeminyaka elungileyo ekufuneka iqwalaselwe. Ngokuqinisekileyo kunye nabo kunye nabo, umtshato uya kuba ngowona wokuqala. Ukuba unephepha elinye kuphela, ke eli isenokuba lelona lokuphatha iiringi. Ukuba uneqabane, inokuhlala inguye nobabini abakhathalela umanyano. Nangona lingekho inani elikhethekileyo lamaphepha omtshato, kuyinyaniso ukuba kukwacetyiswa ukuba angabi ngaphezu kwesi-6. Ngokuqinisekileyo, phakathi kwamalungu entsapho yakho nabantwana babanye abahlobo, uya kukwazi ukunandipha oko kuchukumisa okukhethekileyo kusoloko kusenziwa. ngomtshato wakho!!
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » yokuPhila » Umtshato » Amaphepha omtshato: Yonke into ekufuneka uyazi!
Yintoni omawuyenze ukuba awusaluva uthando ngeqabane lakho
Amaqhinga ezixhobo ezihambelana nokuhombisa